Hiran State - News: HS:- Dagaal u dhaxeya Al qacida iyo ciidamada Hiiraan oo ka dhacay Belet Weyne
HS:- Dagaal u dhaxeya Al qacida iyo ciidamada Hiiraan oo ka dhacay Belet Weyne
HS:- Dagaal si rasmi ah ugu dhaxeeya Al qacida iyo ciidamada Hiiraan oo ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Belet Weyne dagaalkaani ayaa horu dhac u ah dagaalo badan oo u qorsheysan ururweynaha al qacida kaasi oo intiisa badan ku wajahan Jubooyinka, Gedo, Hiiraan iyo caasimada Soomaaliya ee Mogdisho.
Maleeshiyo ka tirsan Al qacida oo maalmahan isku abaabulayey duleedka magaalada Belet Weyne ayaa ugu danbeyn ciidamada Hiiraan ugu tageen goobahii ay kaka sugnaayeen magaalada gaar ahaan xaafada Howl Wadaag oo ah inta badan saldhiga laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo dagaalada kooxdii bur burtay ee Shabaab hadana la baxay Al qacida.
Inta badan kooxaha argagixisada ah waxey si weyn ugu jabeen dagaaladii dhawaantan ka dhacayey guud ahaan koofurta Soomaaliya iyagoona ku soo aruuray dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ah iyo qaraxyo u muuqaal eg naf la caarinmo.
Ciidamada Hiiraan oo xoogooda ku sugan duleedka magalada Belet Weyne ayaa laga yabaa in saacadaha soo socda lagu soo fasaxo magalada hadii dagaalku sii socdo, waxaana durbaba lagu soo waramayaaa in ciidamada ay diyaar yahiin kaliyana sugayaan amar ,hadii ay ciidankaas gudaha u galan xaafada uu dagaalka ka socdane waxey noqon doonaan i qarso waxaana macquul ah baa la leeyahay in xaafadaas u muuqaal ekaato lama degaan maadama ay ciidamadu goob kasta ka fadhiyaan.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya halkaas ayaa sheegaya in ay qarka u saaran yahiin in ciidamada dibada ka jooga magaalada ay gudaha u soo gali rabaan iyagoona qaarkood.......... marka xaqiiqada laga hadlo ninka maanta doonaya isagoo magaca al qacida ku dagalamaya inuu xabad ka rido koofurta Soomaaliya amaba caasimada Hiiraan waa qof lunsan ayuu yiri shaqsi magaciisa ku soo gaabiyey Hasan oo ka mid ah dadka degan xaafada uu dagaalku ka socdo.
Sidoo kale ciidamada Hiiraan ayaa isla maanta fashiliyey qarax la doonayey in lagu waxyeeleeyop shacbaka Hiiran siiba dadka rayidka ah iyadoona gacanta lagusoo dhigay kooxdii falkaas geysan rabtay halka ay qark iyaga ka mid ahaa ku dhax dhuumaaleysanayan shacbaka xaafada uu dagalku ka socdo, taasi oo sababtay inuu soo deg dego dagaalkaan hada socda.
Filo goor dhaw qaabka uu dagalku ku bilaawday iyo wararkii ugudanbeeyey.
· admin on February 11 2012 12:33:17 · 0 Comments · 2381 Reads ·
14,613,019 unique visits